Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းရောဂါ (encephalitis) ဆိုတာ ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းမှုအခြေအနေတစ်ခုပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အဓိကဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ဘာသာစကား၊ မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး သေဆုံးတဲ့ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဖြစ်များတဲ့ရောဂါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးရွယ်အိုတွေလို ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။။ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးအချက်အလက်ရယူပါ။
Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဖြစ်များသော လက္ခဏာတွေကတော့ တုပ်ကွေးနဲ့ အစာအိမ်ပိုးဝင်သောရောဂါတွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
• မောပန်းခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း
• စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ဝေခွဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း
• အပြုအမူ ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာတေ
• အကြားအာရုံ နဲ့ စကားပြောတွင် အခက်အခဲ များရှိခြင်း
• သည်းထန်စွာငိုခြင်း (တစ်နှစ်အောက်ကလေး) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်းကို တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေ ကြောင့်တော့ အဖြစ်နည်းပါတယ်။
• ရောဂါပိုး ကူးစက်ခဲ့ဖူးခြင်း
ရှေ့ကကူးစက်ဖူးပြီးသားရောဂါပိုးကို ကိုယ်ခံအားစနစ်က တိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်တဲ့အခါ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
• Autoimmue( ကိုယ့်ကိုယ်ခံအားစနစ်က ကိုယ့်ကိုပြန်တိုက်ခြင်း )
ကိုယ်ခံအားစနစ်က အခြား အကျိတ်တွေလို ကိုယ့်ခန္ဓါကိုယ်ကို တန်ပြန်သက်ရောက်တဲ့အခါ ဒီရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။
• HIV လိုနာတာရှည်ရောဂါတွေက ရောင်ရမ်းတာကိုဖြစ်စေပါတယ်။
• ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်၊ ခြင်နဲ့ မှက် တွေကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ခွေးရူးပြန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဟာ ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်း ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားစေ အခြေအနေများစွာရှိပါတယ်။ ဥပမာ ။
• အသက်အရွယ် ။ ကလေးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသက် ၂၀ ကနေ ၄၀ ကြား လူအချို့တွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• ကိုယ်ခံအားနည်းခြင်း ။ HIV / AIDS ရှိသူတွေနဲ့ ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းနေသူတွေမှာ ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။
• ခြင်နဲ့ မှက် တွေကနေ ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာ နေရင်သင့်ကို ကူးစက်နိုင်ချေ မြင့်မားပါတယ်။
Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်ရောဂါအတွက် ရောဂါရာဇဝင်နဲ့ လက္ခဏာတွေကို စမ်းသပ်ပါမယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
• ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် ၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပြီး ဦးနှောက် ရောင်ရမ်းခြင်းကို စစ်ဆေးသိရှိစေကာ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်အကျိတ်ကဲ့သို့ အခြား ရောဂါပြဿနာများ မရှိ ကြောင်းကိုလည်း တစ်ခါတည်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။
• ဦးနှောက်ရည်ကြည် စစ်ဆေးခြင်း (Spinal fluid analysis ) ပြုလုပ်ပြီး သွေးဖြူဥ၊ ပရိုတိန်းနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပွားများနေသလားစစ်ဆေးကုသပါမယ်။
• ဦးနှောက်လျှပ်စီးလှိုင်း တိုင်းတာခြင်း (EEG ရိုက်ခြင်း) သုံးပြီး စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါမယ်
• သွေးစစ်ပြီး ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ (encephalitis) ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။
Encephalitis (ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ (encephalitis) ကိုကုသနည်းကတော့ ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိင်ဖို့နဲ့ ဒီရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရေရှည်အကျိုးဆက်တွေကို ဆက်မတိုးအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးတွေကတော့ ။ ။
• အဖျားနဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းလိုမပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေအတွက် အရောင်ကျဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး တွေပေးပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေဟာ ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် လိုပိုးတွေအတွက်ပါထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
• တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ စတီးရွှိက်ဆေးတွေ ( corticosteroids )ပေးပြီး ဦးနှောက်တွင်း ရောင်ရမ်းနေတာကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
• ‘တက်’ ခြင်းဖြစ်ပြီဆိုရင် အတက်ရောဂါပျောက်ဆေး တွေပေးဖို့ဆရာဝန်ကညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
• အထောက်အကူပြု ကုသနည်းများ ။ ဆရာဝန်က သင့်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးတွေပေးပြီး ရောဂါတိုးတက်ဖို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ ရောဂါကိုတန်ပြန်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
Encephalitis. http://www.webmd.com/brain/tc/encephalitis-topic- overview?page=2. Accessed July 21, 2016.
Encephalitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/encephalitis/basics/prevention/con- 20021917. Accessed
Encephalitis. https://medlineplus.gov/ency/article/001415.html. Accessed July 21, 2016.
Encephalitis. http://kidshealth.org/en/parents/encephalitis.html#. Accessed August 1, 2016.Encephalitis. http://www.webmd.com/brain/tc/encephalitis-topic- overview?page=2. Accessed July 21, 2016.